Bombardier Dash-8 Q400 တောင်းဆိုခြင်း
Bombardier Dash-8 Q400 တောင်းဆိုခြင်း2နှစ်ပေါင်း 10 months ago #752
သငျသညျ (Rikoooo) တစ်ဦး Bombardier Dash-8 Q400 စေနိုင်လျှင်ငါချစ်ကြလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့၏ကိုချစ် FSX ထုတ်ကုန်များ, အသေးစားအရွယ်အစား, တတ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှိခြင်း။ ငါတကယ်သင်ကတခြားလေယာဉ်ပျံများအတွက်လုပ်အဖြစ်တော်တော်လေးကြောက်မက်ဘွယ် VC ကိုအတူတစ်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ Bombardier Q400 ကိုရှာနေပါတယ်။
Bombardier Dash-8 Q400 တောင်းဆိုခြင်း2နှစ်ပေါင်း 10 months ago #753
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ Rikoooo မဆိုအောင်မနေသည် FSX add-ons. We are fixing them and making them better where we can ,before making them available for download.
ဒုတိယအ။ တစ်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ Dash8 ရှိပါတယ် FSX. www.premaircraft.com/DHC8-Q400/
ဂရိတ်မော်ဒယ်ရှာဖွေနေ, တက VC ကိုရှိပါတယ် .... ဒါပေမယ့်လည်းကျိုးပုံရသည်။ ကျွန်မဆိုလို, သင်ကထွက်ကြိုးစားနိုင်ပေမယ့်တချို့အမှုအရာကြောင့်မဖြောင့်ကြသည်။